မကွေး ရှစ်လေးလုံး ပုံရိပ် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
မကွေး ရှစ်လေးလုံး ပုံရိပ်
မကွေး ရှစ်လေးလုံး ပုံရိပ် ။ ။ ဖီးနစ်
၂၆နှစ်ကြာ ဖိနှိပ်မှုများအောက်မှ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူများ ညီညွတ်စွာ ရုန်းထခဲ့ကြသည့် နေ့ရက်တစ်ရက်၊ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ထင်ကျန်ရစ်စေမည့် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး သက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သော ၁၉၈၈ခု သြဂုတ်လ(၈)ရက်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်း၏ မြစ်ဖျားခံရာဟု ဆိုပါလျှင် အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော ထိုနေ့ရက်…
ငွေရတုကာလမှ သုံးနှစ်စွန်းမြောက်၍ ၂၈နှစ်အတွင်းသို့ ချင်းနင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သော “၈၈၈၈” အရေးတော်ပုံကြီးသည်ကား အတိတ်ကို အတိတ်မှာချန်ခဲ့၍ ကျန်ခဲ့သည်များရှိသည်ဆိုသော်ငြား ယင်း၏ ပုံရိပ်များမှာမူ ချန်ခဲ့၍ မရစကောင်းသော အတိတ်ကြောင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပေသည်။ အဆိုပါအတိတ်ဟောင်း ကို ပြန်ပြောင်း၍ ငဲ့စောင်းကြည့်မိသောအခါ…
တကယ်တော့ မကွေးမြို့၏ “၈၈၈၈” ပုံရိပ်အစပိုင်းသည် သိပ်ပြီးကြည်လင်ပြတ်သားလှသည်တော့ မဟုတ်ချေ။ကိုယ့်ပေါင်ကို ကိုယ်လှန်ထောင်းမှသာ အနာသက်သာဖွယ်ရှိ၍ ဝန်ခံဖြောင့်ချက်ပေးရချေမည်။
အရာရာချင့်ချိန်သည့်စိတ်ဖြင့် ဆန္ဒမစောတတ်သော၊ အသာစီးမယူ အကြောပေးတတ်သော မကွေးသူ၊ မကွေးသား၊ မကွေးကောလိပ်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတို့သည် “၈၈၈၈” နေ့က လမ်းမများပေါ်သို့ ထွက်ခြင်းမပြု ခဲ့ကြပေ။
စောင့်ကြည့်ချိန်ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ စိတ်မရှည်သူတို့က ကောလိပ်ကျောင်းဝန်းထဲသို့ ထမီထုပ် နှင့် ကျောက်ပျဉ်များ ပစ်ချတော့မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လာမှ လမ်းပေါ်ထွက်၍ “ဒို့အရေး”လုပ်ကြတော့ သည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
မကွေးသားတို့ အထနှေးတတ်သော်လည်း မရသေးသည့်ဒီမိုကရေစီရရှိရေး၊ တစ်ပါတီစနစ်ပြုတ်ကျ ရေး စသည့်အရေးတို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင်မူ ပြင်းထန်ခဲ့သလောက် စည်းကမ်းတကျရှိခဲ့၏။
“၈၈၈၈” အရေးအခင်းတွင် အစပြု၍ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခဲ့ကြသူများထဲမှ ဦးရဲထွဋ်၊ဦးတာ၊ဒေါ်ရှမ်းမတို့ ၏ ရင်တွင်းစကားသံများကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြရသော်…
မကွေးမြို့၌ လူသိများထင်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သော အသက်(၇၅)နှစ်အရွယ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည့် ရှေ့နေကြီးဦးရဲထွဋ်ထံသွားရောက်၍ ၎င်း၏ရင်တွင်းစကားသံကိုရယူခဲ့ရာ….
“ကျောင်းသားနဲ့ လူထုလူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။မကွေးမှာ သြဂုတ်လ (၁၃)ရက်နေ့မှ မဲထီးလမ်းက ကံထူး လဘက်ရည်ဆိုင်နားကစပြီး တောထွက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို ကုလားထိုင် ကို ဝေါလုပ်ပင့်ပြီး လူဆယ့်လေးငါးယောက်လောက်နဲ့ စထွက်ခဲ့ကြတာ”
“အဲဒီအချိန် ချောက်၊ရေနံချောင်းနဲ့ မင်းဘူးတို့မှာက စပြီးနေကြပြီ။အင်အားထောင်ချီလာတဲ့အခါ မဲထီး လမ်းက အောင်ဓမ္မာရုံမှာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီး ကျုပ်တို့ တရားဟောကြတော့တာပဲ။သပိတ်ကဦးဆောင်ပြီး ပထမဆုံးချီတက်ဆန္ဒပြပွဲမှာ လမ်းဘေးမှာရောင်းသည့်ဒံပေါက်ဖြစ်၍ လေးဘမ်းဒံပေါက် အမည်ဖြင့် ရောင်း ချသူ ကိုခင်မောင်လတ်(ကွယ်လွန်)က ထူးထူးခြားခြား မြင်းကြီးစီးပြီး ရှေ့ဆုံးကလိုက်ပါခဲ့တယ်”
“ကျုပ်တို့က မဆလ ပါတီရုံးကိုသွားပြီး ရှေ့မှာ တရားဟောဖို့လုပ်တော့ ကျောင်းသားလေးတွေက သူတို့ကျောကုန်းပေါ်တက်ပြီးဟောပါလို့တောင်ပြောကြတယ်။နောက်မှ စားပွဲခုံတစ်လုံး ရှာယူလာကြလို့ စားပွဲ ပေါ်တက်ဟောခဲ့ရတယ်”
“ပါတီကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး အဲဒီမှာလည်း သပိတ်တပ်စွဲလိုက်တယ်။ ဦးဇနိန္ဒဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ရောက်လာပြီး လူငယ်တွေကို ကိုယ်ခံပညာသင်ပေးတာတို့၊နငယ်ကွင်းပိတ်တွေထိုးပေးပြီး ရဲဆေးတင်ပေးခဲ့ တယ်”
“နောက်ပိုင်းမှာ သစ္စာဖောက်၊သူလျှိုဆိုတဲ့စွဲချက်တွေနဲ့ ပြဿနာပေါ်လာတာတွေရှိတယ်။ တရားစီရင် ဖို့တွေအထိလုပ်လာကြတော့ မလုပ်ကြနဲ့ ငါတို့မှာ ဘာအာဏာမှ မရှိဘူး၊ We are not the government လို့ သဘောပေါက်အောင်ပြောပြီး ထိန်းခဲ့ရတယ်”
“ချောက်မှာ ရဲကပစ်လို့ ကောင်လေးတစ်ယောက်သေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘုန်းကြီးဦးဇနိန္ဒနဲ့ ကျုပ်တို့ သွားခဲ့ကြပြီးအပြန်မှာ ရေနံချောင်းကိုရောက်တော့ ရေနံချောင်းသပိတ်ကတားပြီး သူလျှိုတွေဖြစ်မယ် ဆိုပြီး စစ်ဆေးခံခဲ့ရသေးတယ်။ ခေါ်သွားတဲ့ ကျောင်းက သပိတ်အစပိုင်းတုန်းက ကိုမြင့်ဦးနဲ့အတူ အစည်းအဝေး တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းဖြစ်နေလို့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြတယ်”
“ပါတီရုံးရဲ့ရှေ့မှာ စင်ကြီးထိုးပြီး နေ့တိုင်းလောက် တရားတွေဟောခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံး ချီတက် ဆန္ဒပြပွဲမှာ ကျောင်းသားနဲ့ အရပ်သား၊လူတန်းစားပေါင်းစုံသာမကတော့ဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာတွေပါ ပါလာပြီး လူတန်းကြီးက အောင်ဓမ္မာရုံကနေ ဘောလုံးကွင်းအထိ မဆုံးတော့ဘူး”
မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သူ ဦးတာထံသွားရောက်၍ ၎င်း၏ရင်တွင်းစကားသံများကိုရယူ ခဲ့ရာ..
“ကိုယ်ကတော့ သြဂုတ် ၁၀ရက်နေ့စတယ်လို့ပဲမှတ်ထားတယ်။မဲထီးလမ်းကစထွက်လာတဲ့ လူဆယ့် လေးငါးယောက်လောက် ကိုယ့်အိမ်နားရောက်လာတော့ ပါလာတဲ့ ဦးစိုးသိန်းကြီးက ဟေ့ကောင်မောင်တာ လာ ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာ ၁၀ရက်နေ့တောင်ရောက်နေပြီ နောက်ကျလိုက်တာပေါ့။ သူများတွေ ၈ ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကတောင် ချနေကြပြီလို့ ပြောပြီးလိုက်သွားတာ။ စသုံးလုံးရှေ့ ရောက်တော့ ဓာတ်ပုံတွေလှမ်းရိုက်ကြလို့ ပုဆိုးတွေနဲ့မျက်နှာကိုစည်းပြီး ရုပ်ဖျက်ကြရသေးတယ်”
“သပိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ ကိုတာ တရားဟောပေးပါ။ဟောနေကြတာ အမြီးအမောက်မတည့်ကြဘူးဆိုပြီး တောင်းဆိုတာကြောင့် မန်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအမည်နဲ့ဟောတော့ မကွေးတင်မဟုတ်တော့ဘူး မင်းဘူး ဘက်ပါသွားဟောရတယ်။တစ်ခါ ပါတီသိမ်းပြီးတော့လည်း ပါတီရှေ့ကစင်မှာ ဟောရတယ်”
“သပိတ်ကာလမှာ ထိန်းသိမ်းမှုကောင်းကောင်းနဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေထဲမှာ ကွယ် လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးဆင့်ဟာ ထိပ်ဆုံးကပါပဲ။သရက်လေးပင်က ဦးခင်မောင်ဆန်း(ပမညတ)လည်း သိပ်တော် တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ဦးအောင်ကျော်စိုးရဲ့အိမ်မှာ သပိတ်စခန်းကလူတွေကိုခေါ်ပြောတာ။လူလေးတို့ အခုလုပ်နေတဲ့ သပိတ်က ကြာလာရင် ပြည်သူအားကိုးရတဲ့ပုံစံကနေ မင်းမဲ့စရိုက်ပုံစံဖြစ်လာမယ်။ သတိထားပြီးလုပ်ကြဖို့လိုမယ်တဲ့”
“ဟုတ်တယ် ထောင်တွေဖောက်လွှတ်လိုက်တော့ ထောင်သားတွေရောက်လာတယ်။သူတို့ကို ထိန်း သိမ်းကျွေးမွေးပြီး သွားလိုတဲ့နေရာကိုသွားနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးရတယ်။အဲလိုမလုပ်ရင် မြို့ပျက်သွားမယ်လေ။ ထမင်းကျွေးဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးချစ်မှိန်ဆို နားတယ်ကိုမရှိရဘူး”
“ဓာတ်ဆီဆိုင်သိမ်းမယ်၊ကုန်သွယ်ရေးသိမ်းမယ်လုပ်ပြန်တော့လည်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မ တီဖွဲ့ပြီး မလုပ်ကြဖို့တားရတယ်။မဆလ အတွက်ဆို မရောင်းနဲ့၊ရောင်းရမယ့်သူတွေကိုလည်း စနစ်တကျနဲ့ ရောင်းပေးဖို့ ပြောရတယ်။အဲသလိုမှ မလုပ်နိုင်ရင် နောက်ပိုင်း ပြဿနာတွေ အတော်ရှင်းယူရမယ်”
“အဲလိုစည်းကမ်းတကျထိန်းနိုင်ခဲ့လို့ ဘာကိစ္စမှ မကွေးမှာ လွန်လွန်ကျူးကျူးမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ မကွေးသမိုင်း က အဲသလောက်ကောင်းခဲ့တယ်။ သတ်တာဖြတ်တာ ဘာမှ မရှိခဲ့ဘူး။သပိတ်အစမှာ ကျောင်းသားတွေ ချီတက်တဲ့ အခါကိုင်ဖို့ ခွပ်ဒေါင်းအလံကို တိုင်းဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာ ဦးရဲမြင့်ရဲ့ ဇနီးကထုတ်ပေးခဲ့တာ”
“စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာက သပိတ်တုန်းက ထမင်းပို့တဲ့သူတွေကိုတောင် စာရင်းလိုက်မှတ်ပြီး သတင်းပို့ခဲ့တဲ့သူတွေက အခု အဖွဲ့အစည်းမှာခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး နေရာယူနေတာ ရယ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဦးတာကတော့ သပိတ်မှာ တရားဟောစည်းရုံးတာနဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ပဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ”
NDF ကျောင်းသားအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ရှမ်းမ(ရောင်ပေစူး)ထံ သွားရောက်၍ ၎င်း၏ ရင်တွင်းစကားသံကိုရယူခဲ့ရာတွင်လည်း..
“ကျွန်မအဓိကတာဝန်ယူခဲ့တာက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ စည်းရုံးရေးပါ။အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူ တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထူးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုအောင်ခိုင်ငြိမ်းတို့ ကိုဇော်မင်းခိုင်တို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာပါ”
“မကွေးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေနဲ့ နတ်မောက်တို့ တောင်တွင်းတို့မှာသွားပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့အခါ အစာငတ်၊ရေငတ်ခံပြီး ခက်ခက်ခဲခဲသွားခဲ့ကြရပါတယ်။ယာခင်းတွေက ဦးကြီးတွေကျွေးတဲ့ ထမင်းကြမ်းနဲ့ လဘက်သုပ်ကို တစ်သက်မေ့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး”
“ကျွန်မတို့ NDF က တောင်စာသင်တိုက်နားမှာ ရုံးခန်းဖွင့်ခဲ့ပြီး မြို့လယ်ဘုရားမှာ တပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ မကွေးက “၈၈၈၈” လှုပ်ရှားမှုနောက်ကျခဲ့ပါတယ်။ရေနံချောင်းတို့ ချောက်တို့မှာတောင် ကျမတို့ထက်စောပါတယ်။ မကွေး “၈၈၈၈” အစ မဲထီးလမ်းက လို့ ဆိုရမှာပါ။ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကို ကုလားထိုင်ကိုဝေါလုပ် ပင့်ပြီး စထွက်ခဲ့ကြတာ၊စထွက်တုန်းက အယောက်၂၀ လောက်ပဲရှိပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ၂၀၀ကျော်သုံးရာ လောက်ဖြစ်သွားတယ်”
“ဒီမိုကရေစီရချင်လို့လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အခုမှ အရှိန်အဝါတွေ ဂုဏ်တွေနဲ့ နေရာယူသူတွေထက် အရေး အခင်းတုန်းက အနာခံရှေ့တန်းထွက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး နေရာရစေချင်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာတွေမှာ ဒေါင်းယောင်ဆောင်သော ကျီးတွေရောက်မနေစေချင်ဘူး”
“၈၈၈၈” အရေးအခင်းတွင် စိတ်အားထက်သန်စွာ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့သူများနှင့် အကုန်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် အခက်အခဲရှိ၍ ကျန်ရှိခဲ့မှုအပေါ် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ပါရန် ….။
မကွေးမြို့သမိုင်း သွေးစွန်းခြင်းမရှိခဲ့သော “၈၈၈၈” သပိတ်ကြီးမှာ ၁၉၈၈ ခု စက်တင်ဘာ (၁၈)ရက် နေ့တွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းဖြိုခွဲမှုကြောင့် မကွေးမြေ၌ မကွေးသားအချို့ သွေးမြေကျ အသက် စတေးခဲ့ကြရခြင်းများရှိခဲ့ကာ တပ်မတော်သားတစ်ဦးလည်း သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် ယဉ်ပါးမှုမရှိခဲ့သော မကွေးသားတချို့ စစ်တပ်ဆင်းလာရာလမ်း ကြောင်းတစ်လျှောက်၌ အရဲကိုးကာ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသဖြင့် စစ်မြေပြင် မဟုတ်ပါဘဲနှင့် သေနတ်ကျည်ထိမှန်ခံခဲ့ရသူများရှိခဲ့ပြီး အသက် သေဆုံးရမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသည်။
ကောလာဟလ သတင်းများအနေဖြင့် ဆယ်ဂဏန်းထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု ကြားသိခဲ့ရ သော်လည်း ဝါးတောမီးလောင်သကဲ့သို့ ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သောည အလွန် နောက်တစ်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် စာရေးသူ ကိုယ်တိုင် မြို့တွင်းသို့ အရဲစွန့်၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရာတွင်မူ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် မဲထီးလမ်း ထောင့်တွင် အလောင်း(၁)လောင်း၊ခရစ်ယာန်ကျောင်းအနီး အထက ၂ လမ်းပေါ်မှ အလောင်း(၁)လောင်းကိုသာတွေ့ရှိရပြီး လမ်းဖြတ်အပြေးတွင် ပစ်ခတ်ခံရသဖြင့် မေးရိုးအမှန်ခံလိုက်ရသူတစ်ဦး ရှိကြောင်းသ်ိရ၏။
ထိုနေ့ညက စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း အတွေ့အကြုံရှိသူ၏ တားမြစ်မှုကြောင့်သာ ချမ်းသာရာရရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုရချေမည်။ရွာသစ်ရပ်ကွက်မှ ထိုစဉ်က ကာလသားခေါင်းဆောင် ဦးစိန်မြ၏နေအိမ်သို့ စာရေးသူနှင့်လူငယ်အဖွဲ့တို့ သွားရောက်ကာ လမ်းပိတ်ဆို့တားဆီးကြရန် အသိပေးပြောကြားခဲ့ရာတွင် “ဟကောင်လေးတွေ..သေချင်ကြလို့လား..စစ်ဘီလူးတဲ့ဟ..သွားကြ ကိုယ့်အိမ်မှာကို အေးအေးနေကြ”ဟု ငေါက်ငမ်းတားဆီးခဲ့၍ဖြစ်သည်။
၂၆နှဈကွာ ဖိနှိပျမှုမြားအောကျမှ တဈနိုငျငံလုံးရှိ ရဟနျးရှငျလူ ကြောငျးသားပွညျသူမြား ညီညှတျစှာ ရုနျးထခဲ့ကွသညျ့ နရေ့ကျတဈရကျ၊ မွနျမာ့သမိုငျးတှငျ ထငျကနျြရဈစမေညျ့ ရှဈလေးလုံးအရေးတျောပုံကွီး သကျဝငျလှုပျရှားခဲ့သော ၁၉၈၈ခု သွဂုတျလ(၈)ရကျ၊ မွနျမာ့နိုငျငံရေးအလှညျ့အပွောငျး၏ မွဈဖြားခံရာဟု ဆိုပါလြှငျ အငွငျးပှားဖှယျမရှိသော ထိုနရေ့ကျ…
ငှရေတုကာလမှ သုံးနှဈစှနျးမွောကျ၍ ၂၈နှဈအတှငျးသို့ ခငျြးနငျးဝငျရောကျခဲ့ပွီဖွဈသော “၈၈၈၈” အရေးတျောပုံကွီးသညျကား အတိတျကို အတိတျမှာခနျြခဲ့၍ ကနျြခဲ့သညျမြားရှိသညျဆိုသျောငွား ယငျး၏ ပုံရိပျမြားမှာမူ ခနျြခဲ့၍ မရစကောငျးသော အတိတျကွောငျးတဈခုပငျဖွဈပသေညျ။ အဆိုပါအတိတျဟောငျး ကို ပွနျပွောငျး၍ ငဲ့စောငျးကွညျ့မိသောအခါ…
တကယျတော့ မကှေးမွို့၏ “၈၈၈၈” ပုံရိပျအစပိုငျးသညျ သိပျပွီးကွညျလငျပွတျသားလှသညျတော့ မဟုတျခြေ။ကိုယျ့ပေါငျကို ကိုယျလှနျထောငျးမှသာ အနာသကျသာဖှယျရှိ၍ ဝနျခံဖွောငျ့ခကျြပေးရခမြေညျ။
အရာရာခငျြ့ခြိနျသညျ့စိတျဖွငျ့ ဆန်ဒမစောတတျသော၊ အသာစီးမယူ အကွောပေးတတျသော မကှေးသူ၊ မကှေးသား၊ မကှေးကောလိပျကြောငျးသား၊ကြောငျးသူတို့သညျ “၈၈၈၈” နကေ့ လမျးမမြားပျေါသို့ ထှကျခွငျးမပွု ခဲ့ကွပေ။
စောငျ့ကွညျ့ခြိနျကွာမွငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ စိတျမရှညျသူတို့က ကောလိပျကြောငျးဝနျးထဲသို့ ထမီထုပျ နှငျ့ ကြောကျပဉျြမြား ပဈခတြော့မညျဟု သတငျးမြားထှကျပျေါလာမှ လမျးပျေါထှကျ၍ “ဒို့အရေး”လုပျကွတော့ သညျဟု ဆိုနိုငျပသေညျ။
မကှေးသားတို့ အထနှေးတတျသျောလညျး မရသေးသညျ့ဒီမိုကရစေီရရှိရေး၊ တဈပါတီစနဈပွုတျကြ ရေး စသညျ့အရေးတို့အတှကျတိုကျပှဲဝငျရာတှငျမူ ပွငျးထနျခဲ့သလောကျ စညျးကမျးတကရြှိခဲ့၏။
“၈၈၈၈” အရေးအခငျးတှငျ အစပွု၍ တကျကွှစှာလှုပျရှားခဲ့ကွသူမြားထဲမှ ဦးရဲထှဋျ၊ဦးတာ၊ဒျေါရှမျးမတို့၏ ရငျတှငျးစကားသံမြားကို ကောကျနှုတျဖျောပွရသျော…
မကှေးမွို့၌ လူသိမြားထငျရှားသူတဈဦးဖွဈသော အသကျ(၇၅)နှဈအရှယျသို့ ရောကျရှိနပွေီဖွဈသညျ့ ရှနေ့ကွေီးဦးရဲထှဋျထံသှားရောကျ၍၎င်းငျး၏ရငျတှငျးစကားသံကိုရယူခဲ့ရာ….
“ကြောငျးသားနဲ့ လူထုလူတနျးစားပေါငျးစုံ ပါဝငျဆငျနှဲခဲ့လို့အောငျမွငျခဲ့တာပါ။မကှေးမှာ သွဂုတျလ (၁၃)ရကျနမှေ့ မဲထီးလမျးက ကံထူး လဘကျရညျဆိုငျနားကစပွီး တောထှကျဘုနျးကွီးတဈပါးကို ကုလားထိုငျ ကို ဝေါလုပျပငျ့ပွီး လူဆယျ့လေးငါးယောကျလောကျနဲ့ စထှကျခဲ့ကွတာ”
“အဲဒီအခြိနျ ခြောကျ၊ရနေံခြောငျးနဲ့ မငျးဘူးတို့မှာက စပွီးနကွပွေီ။အငျအားထောငျခြီလာတဲ့အခါ မဲထီး လမျးက အောငျဓမ်မာရုံမှာ သပိတျစခနျးဖှငျ့ပွီး ကြုပျတို့ တရားဟောကွတော့တာပဲ။သပိတျကဦးဆောငျပွီး ပထမဆုံးခြီတကျဆန်ဒပွပှဲမှာ လမျးဘေးမှာရောငျးသညျ့ဒံပေါကျဖွဈ၍ လေးဘမျးဒံပေါကျ အမညျဖွငျ့ ရောငျး ခသြူ ကိုခငျမောငျလတျ(ကှယျလှနျ)က ထူးထူးခွားခွား မွငျးကွီးစီးပွီး ရှဆေုံ့းကလိုကျပါခဲ့တယျ”
“ကြုပျတို့က မဆလ ပါတီရုံးကိုသှားပွီး ရှမှေ့ာ တရားဟောဖို့လုပျတော့ ကြောငျးသားလေးတှကေ သူတို့ကြောကုနျးပျေါတကျပွီးဟောပါလို့တောငျပွောကွတယျ။နောကျမှ စားပှဲခုံတဈလုံး ရှာယူလာကွလို့ စားပှဲ ပျေါတကျဟောခဲ့ရတယျ”
“ပါတီကိုသိမျးယူနိုငျခဲ့ပွီး အဲဒီမှာလညျး သပိတျတပျစှဲလိုကျတယျ။ ဦးဇနိန်ဒဆိုတဲ့ဘုနျးကွီးတဈပါး ရောကျလာပွီး လူငယျတှကေို ကိုယျခံပညာသငျပေးတာတို့၊နငယျကှငျးပိတျတှထေိုးပေးပွီး ရဲဆေးတငျပေးခဲ့ တယျ”
“နောကျပိုငျးမှာ သစ်စာဖောကျ၊သူလြှိုဆိုတဲ့စှဲခကျြတှနေဲ့ ပွဿနာပျေါလာတာတှရှေိတယျ။ တရားစီရငျ ဖို့တှအေထိလုပျလာကွတော့ မလုပျကွနဲ့ ငါတို့မှာ ဘာအာဏာမှ မရှိဘူး၊ We are not the government လို့ သဘောပေါကျအောငျပွောပွီး ထိနျးခဲ့ရတယျ”
“ခြောကျမှာ ရဲကပဈလို့ ကောငျလေးတဈယောကျသတေဲ့ ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဘုနျးကွီးဦးဇနိန်ဒနဲ့ ကြုပျတို့ သှားခဲ့ကွပွီးအပွနျမှာ ရနေံခြောငျးကိုရောကျတော့ ရနေံခြောငျးသပိတျကတားပွီး သူလြှိုတှဖွဈေမယျ ဆိုပွီး စဈဆေးခံခဲ့ရသေးတယျ။ ချေါသှားတဲ့ ကြောငျးက သပိတျအစပိုငျးတုနျးက ကိုမွငျ့ဦးနဲ့အတူ အစညျးအဝေး တကျခဲ့တဲ့ ကြောငျးဖွဈနလေို့ ပွနျလှတျပေးလိုကျကွတယျ”
“ပါတီရုံးရဲ့ရှမှေ့ာ စငျကွီးထိုးပွီး နတေို့ငျးလောကျ တရားတှဟေောခဲ့ရတယျ။နောကျဆုံး ခြီတကျ ဆန်ဒပွပှဲမှာ ကြောငျးသားနဲ့ အရပျသား၊လူတနျးစားပေါငျးစုံသာမကတော့ဘဲ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှေ၊ ဌာနဆိုငျရာတှပေါ ပါလာပွီး လူတနျးကွီးက အောငျဓမ်မာရုံကနေ ဘောလုံးကှငျးအထိ မဆုံးတော့ဘူး”
မန်တလေးတက်ကသိုလျကြောငျးသားဖွဈခဲ့သူ ဦးတာထံသှားရောကျ၍၎င်းငျး၏ရငျတှငျးစကားသံမြားကိုရယူ ခဲ့ရာ..
“ကိုယျကတော့ သွဂုတျ ၁၀ရကျနစေ့တယျလို့ပဲမှတျထားတယျ။မဲထီးလမျးကစထှကျလာတဲ့ လူဆယျ့ လေးငါးယောကျလောကျ ကိုယျ့အိမျနားရောကျလာတော့ ပါလာတဲ့ ဦးစိုးသိနျးကွီးက ဟကေ့ောငျမောငျတာ လာ ဆိုပွီးတော့ချေါတယျ။ခငျဗြားတို့ကလညျးဗြာ ၁၀ရကျနတေ့ောငျရောကျနပွေီ နောကျကလြိုကျတာပေါ့။ သူမြားတှေ ၈ ရကျနမေ့တိုငျခငျကတညျးကတောငျ ခနြကွပွေီလို့ ပွောပွီးလိုကျသှားတာ။ စသုံးလုံးရှေ့ ရောကျတော့ ဓာတျပုံတှလှေမျးရိုကျကွလို့ ပုဆိုးတှနေဲ့မကျြနှာကိုစညျးပွီး ရုပျဖကျြကွရသေးတယျ”
“သပိတျဖှဲ့ပွီးတော့ ကိုတာ တရားဟောပေးပါ။ဟောနကွတော အမွီးအမောကျမတညျ့ကွဘူးဆိုပွီး တောငျးဆိုတာကွောငျ့ မနျးတက်ကသိုလျကြောငျးသားအမညျနဲ့ဟောတော့ မကှေးတငျမဟုတျတော့ဘူး မငျးဘူး ဘကျပါသှားဟောရတယျ။တဈခါ ပါတီသိမျးပွီးတော့လညျး ပါတီရှကေ့စငျမှာ ဟောရတယျ”
“သပိတျကာလမှာ ထိနျးသိမျးမှုကောငျးကောငျးနဲ့ စိတျရောကိုယျပါဆောငျရှကျခဲ့သူတှထေဲမှာ ကှယျ လှနျသှားပွီဖွဈတဲ့ ဦးဆငျ့ဟာ ထိပျဆုံးကပါပဲ။သရကျလေးပငျက ဦးခငျမောငျဆနျး(ပမညတ)လညျး သိပျတျော တဲ့ပုဂ်ဂိုလျပါ။ ဦးအောငျကြျောစိုးရဲ့အိမျမှာ သပိတျစခနျးကလူတှကေိုချေါပွောတာ။လူလေးတို့ အခုလုပျနတေဲ့ သပိတျက ကွာလာရငျ ပွညျသူအားကိုးရတဲ့ပုံစံကနေ မငျးမဲ့စရိုကျပုံစံဖွဈလာမယျ။ သတိထားပွီးလုပျကွဖို့လိုမယျတဲ့”
“ဟုတျတယျ ထောငျတှဖေောကျလှတျလိုကျတော့ ထောငျသားတှရေောကျလာတယျ။သူတို့ကို ထိနျး သိမျးကြှေးမှေးပွီး သှားလိုတဲ့နရောကိုသှားနိုငျဖို့ စီစဉျပေးရတယျ။အဲလိုမလုပျရငျ မွို့ပကျြသှားမယျလေ။ ထမငျးကြှေးဖို့တာဝနျယူထားတဲ့ ဦးခဈြမှိနျဆို နားတယျကိုမရှိရဘူး”
“ဓာတျဆီဆိုငျသိမျးမယျ၊ကုနျသှယျရေးသိမျးမယျလုပျပွနျတော့လညျး စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေး ကျောမ တီဖှဲ့ပွီး မလုပျကွဖို့တားရတယျ။မဆလ အတှကျဆို မရောငျးနဲ့၊ရောငျးရမယျ့သူတှကေိုလညျး စနဈတကနြဲ့ ရောငျးပေးဖို့ ပွောရတယျ။အဲသလိုမှ မလုပျနိုငျရငျ နောကျပိုငျး ပွဿနာတှေ အတျောရှငျးယူရမယျ”
“အဲလိုစညျးကမျးတကထြိနျးနိုငျခဲ့လို့ ဘာကိစ်စမှ မကှေးမှာ လှနျလှနျကြူးကြူးမဖွဈခဲ့ဘူး။ မကှေးသမိုငျး က အဲသလောကျကောငျးခဲ့တယျ။ သတျတာဖွတျတာ ဘာမှ မရှိခဲ့ဘူး။သပိတျအစမှာ ကြောငျးသားတှေ ခြီတကျတဲ့ အခါကိုငျဖို့ ခှပျဒေါငျးအလံကို တိုငျးဆကျသှယျရေးမနျနဂြော ဦးရဲမွငျ့ရဲ့ ဇနီးကထုတျပေးခဲ့တာ”
“စိတျမကောငျးစရာကောငျးတာက သပိတျတုနျးက ထမငျးပို့တဲ့သူတှကေိုတောငျ စာရငျးလိုကျမှတျပွီး သတငျးပို့ခဲ့တဲ့သူတှကေ အခု အဖှဲ့အစညျးမှာခေါငျးဆောငျလုပျပွီး နရောယူနတော ရယျဖို့ကောငျးတယျ။ ဦးတာကတော့ သပိတျမှာ တရားဟောစညျးရုံးတာနဲ့ စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးအတှကျပဲ ဆောငျရှကျခဲ့တာပါ”
NDF ကြောငျးသားအဖှဲ့ ခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈသူ ဒျေါရှမျးမ(ရောငျပစေူး)ထံ သှားရောကျ၍၎င်းငျး၏ ရငျတှငျးစကားသံကိုရယူခဲ့ရာတှငျလညျး..
“ကြှနျမအဓိကတာဝနျယူခဲ့တာက ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုနဲ့ စညျးရုံးရေးပါ။အစာငတျခံဆန်ဒပွသူ တှရေဲ့ ကနျြးမာရေးကို အထူးပွုစုစောငျ့ရှောကျခဲ့ရပါတယျ။ကိုအောငျခိုငျငွိမျးတို့ ကိုဇျောမငျးခိုငျတို့ရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့ လှုပျရှားခဲ့ကွတာပါ”
“မကှေးပတျဝနျးကငျြကြေးရှာတှနေဲ့ နတျမောကျတို့ တောငျတှငျးတို့မှာသှားပွီး စညျးရုံးရေးဆငျးတဲ့အခါ အစာငတျ၊ရငေတျခံပွီး ခကျခကျခဲခဲသှားခဲ့ကွရပါတယျ။ယာခငျးတှကေ ဦးကွီးတှကြှေေးတဲ့ ထမငျးကွမျးနဲ့ လဘကျသုပျကို တဈသကျမလေို့ရမှာမဟုတျပါဘူး”
“ကြှနျမတို့ NDF က တောငျစာသငျတိုကျနားမှာ ရုံးခနျးဖှငျ့ခဲ့ပွီး မွို့လယျဘုရားမှာ တပျစှဲခဲ့ပါတယျ။ မကှေးက “၈၈၈၈” လှုပျရှားမှုနောကျကခြဲ့ပါတယျ။ရနေံခြောငျးတို့ ခြောကျတို့မှာတောငျ ကမြတို့ထကျစောပါတယျ။ မကှေး “၈၈၈၈” အစ မဲထီးလမျးက လို့ ဆိုရမှာပါ။ဘုနျးတျောကွီးတဈပါးကို ကုလားထိုငျကိုဝေါလုပျ ပငျ့ပွီး စထှကျခဲ့ကွတာ၊စထှကျတုနျးက အယောကျ၂၀ လောကျပဲရှိပမေယျ့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ၂၀၀ကြျောသုံးရာ လောကျဖွဈသှားတယျ”
“ဒီမိုကရစေီရခငျြလို့လုပျခဲ့ကွတာပါ။အခုမှ အရှိနျအဝါတှေ ဂုဏျတှနေဲ့ နရောယူသူတှထေကျ အရေး အခငျးတုနျးက အနာခံရှတေ့နျးထှကျခဲ့ကွတဲ့ ကြောငျးသားဟောငျးတှကေို အသိအမှတျပွုပွီး နရောရစခေငျြပါတယျ။ခေါငျးဆောငျပိုငျးနရောတှမှော ဒေါငျးယောငျဆောငျသော ကြီးတှရေောကျမနစေခေငျြဘူး”
“၈၈၈၈” အရေးအခငျးတှငျ စိတျအားထကျသနျစှာ ဦးဆောငျလှုပျရှားခဲ့သူမြားနှငျ့ အကုနျတှဆေုံ့မေးမွနျးရနျ အခကျအခဲရှိ၍ ကနျြရှိခဲ့မှုအပျေါ နားလညျခှငျ့လှတျပေးနိုငျပါရနျ ….။
မကှေးမွို့သမိုငျး သှေးစှနျးခွငျးမရှိခဲ့သော “၈၈၈၈” သပိတျကွီးမှာ ၁၉၈၈ ခု စကျတငျဘာ (၁၈)ရကျ နတှေ့ငျ စဈတပျမှ အာဏာသိမျးဖွိုခှဲမှုကွောငျ့ မကှေးမွေ၌ မကှေးသားအခြို့ သှေးမွကြေ အသကျ စတေးခဲ့ကွရခွငျးမြားရှိခဲ့ကာ တပျမတျောသားတဈဦးလညျး သဆေုံးခဲ့ရသညျဟု သိရသညျ။
စဈတပျအာဏာသိမျးခွငျးနှငျ့ ယဉျပါးမှုမရှိခဲ့သော မကှေးသားတခြို့ စဈတပျဆငျးလာရာလမျး ကွောငျးတဈလြှောကျ၌ အရဲကိုးကာ လမျးကွောငျးပိတျဆို့ခွငျးမြား ပွုလုပျကွသဖွငျ့ စဈမွပွငျေ မဟုတျပါဘဲနှငျ့ သနေတျကညျြထိမှနျခံခဲ့ရသူမြားရှိခဲ့ပွီး အသကျ သဆေုံးရမှုမြားနှငျ့ကွုံတှခေဲ့ကွရသညျ။
ကောလာဟလ သတငျးမြားအနဖွငျေ့ ဆယျဂဏနျးထကျမနညျး သဆေုံးခဲ့ရသညျဟု ကွားသိခဲ့ရ သျောလညျး ဝါးတောမီးလောငျသကဲ့သို့ ပဈခတျမှုမြားပွုလုပျခဲ့သောည အလှနျ နောကျတဈနေ့ မနကျပိုငျးတှငျ စာရေးသူ ကိုယျတိုငျ မွို့တှငျးသို့ အရဲစှနျ့၍ သှားရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ရာတှငျမူ ဗိုလျခြုပျလမျးနှငျ့ မဲထီးလမျး ထောငျ့တှငျ အလောငျး(၁)လောငျး၊ခရဈယာနျကြောငျးအနီး အထက ၂ လမျးပျေါမှ အလောငျး(၁)လောငျးကိုသာတှရှေိ့ရပွီး လမျးဖွတျအပွေးတှငျ ပဈခတျခံရသဖွငျ့ မေးရိုးအမှနျခံလိုကျရသူတဈဦး ရှိကွောငျးသျိရ၏။
ထိုနညေ့က စာရေးသူကိုယျတိုငျလညျး အတှအေ့ကွုံရှိသူ၏ တားမွဈမှုကွောငျ့သာ ခမျြးသာရာရရှိခဲ့ ခွငျးဖွဈသညျဟု ဆိုရခမြေညျ။ရှာသဈရပျကှကျမှ ထိုစဉျက ကာလသားခေါငျးဆောငျ ဦးစိနျမွ၏နအေိမျသို့ စာရေးသူနှငျ့လူငယျအဖှဲ့တို့ သှားရောကျကာ လမျးပိတျဆို့တားဆီးကွရနျ အသိပေးပွောကွားခဲ့ရာတှငျ “ဟကောငျလေးတှေ..သခေငျြကွလို့လား..စဈဘီလူးတဲ့ဟ..သှားကွ ကိုယျ့အိမျမှာကို အေးအေးနကွေ”ဟု ငေါကျငမျးတားဆီးခဲ့၍ဖွဈသညျ။